Disa - Message hub for SMS, Telegram, FB Messenger 0.9.9.8 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 0.9.9.8 လြန္ခဲ့ေသာ2လက
Application မ်ား စာအုပ္မ်ား & ရည္ညႊန္းခ်က္ Disa - Message hub for SMS, Telegram, FB Messenger
Disa - Message hub for SMS, Telegram, FB Messenger ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
Disa တဦးတည်းအလယ်ပိုင်းလျှောက်လွှာသို့မျိုးစုံချက်တင် & စာပို့ခြင်းပလက်ဖောင်းပေါင်းစပ်ပြီးတစ်ဦးစုစည်း messaging app ဖြစ်ပါတယ်။ အခြားစာတိုပို့ apps များ download လုပ်ပါ & အခမဲ့သင့်ရဲ့ device ကိုစုပြုံပြွတ်သိပ်ထားရန်လိုအပ်ကြောင်းပပျောက်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ All-In-One ကို messaging app အားလုံးသင့်ရဲ့မက်ဆေ့ခ်ျများ & ချတ်ကျစ်လစ်။
ဒါဟာဤမျှလောက်များစွာသောကွဲပြားခြားနားသောချက်တင် & စာပို့ခြင်း apps များအားဖြင့်သင်တို့၏အဆက်အသွယ်နှငျ့ဆကျသှယျဖို့ခက်ခဲတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ Disa သင်သည်တစ်ခုတည်း app ကိုအားလုံးသင့်ရဲ့မက်ဆေ့ခ်ျကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်အောင်သင်တဦးတည်းအလယ်ပိုင်းအရပျ၌ကို SMS, ကြေးနန်းနှင့် Facebook Messenger ကိုပေါ်မှာရှိသမျှကိုသင်၏ချတ် & မက်ဆေ့ခ်ျများပေါင်းစည်းခွင့်ပြုမယ့်တစ်ခုတည်းသောစာတိုပေးပို့ရေးအချက်အချာဖြစ်ပါတယ်။
ထို့အပြင် app ကိုသင့်ရဲ့စာတွေကိုစုစည်းဖို့မျိုးစုံ settings ကိုနှင့်စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်စရာပေးထားပါတယ်။ သငျသညျ, သင့် chatting အတွေ့အကြုံကို personalize ဆို messaging service မှအဆက်အသွယ်နှင့်အတူရောထွေးအုပ်စုများဖန်တီး, စာသား & မက်ဆေ့ခ်ျကိုများအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောစာလုံးအရောင်တွေသှ set, ဗွီဒီယိုများပေးပို့ & ရုပ်ပြောင် & ပိုပြီးအများကြီးပြုအခမဲ့အားလုံးနိုငျပါသညျ!
Disa - Message hub for SMS, Telegram, FB Messenger အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Disa - Message hub for SMS, Telegram, FB Messenger အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Disa - Message hub for SMS, Telegram, FB Messenger အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Disa - Message hub for SMS, Telegram, FB Messenger အား အခ်က္ျပပါ
megstore စတိုး 411 100.57k
Disa - Message hub for SMS, Telegram, FB Messenger ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Disa - Message hub for SMS, Telegram, FB Messenger အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 0.9.9.8
Disa - Message hub for SMS, Telegram, FB Messenger APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ